Hafa ny Easyjet Fleet v1.0 FSX & P3D
Firafitry ny fiaramanidina manontolo
Easyjet Fleet v1.0 FSX & P3D HOT
Io fonosana dia ahitana ohatra maro sy ny repaints in provenances ny mpanoratra samy hafa, ny lisitry ny mpanoratra tsy ampy amin'ny alalan'ny installer. Misaotra anao lehibe ho azy ireo mba hanome antsika kalitao Freeware
Raiso fanaraha-maso ny taloha Boeing 737-300 (No VC) tafiditra amin'ny dimy repaints + feno Panel 2D
Ny Boeing 737-700 (amin'ny VC) + Advanced cockpit amin'ny Alrot + wipers
Ny Airbus A319-111 (amin'ny VC) tafiditra ao anatin'izany ny telo repaints Serie manokana "Unicef" + manokana Pack + A319 V3 + manga LED, ny fiaramanidina manomboka fitaovana sy Manazava eny, VAKIO NY TANJONA
Ny Airbus A320-200 (miaraka amin'ny VC) miaraka amina loko telo miaraka amina volomboasary fanontana manokana faha-200 + Kitapo manokana + A320 V3 + LED manga, ny fiaramanidina manomboka fitaovana sy Manazava eny, VAKIO NY TANJONA
Ary ny Easyjet fiara fitateram-bahoaka roa repaints, dia afaka manidina mihitsy aza!
Misaotra anao François Doré for Airbus fanontana manokana V3 A319 / A320 mifanaraka io fonosana. Izany no mahatonga Airbus tena zava-misy.
Fiaramanidina rehetra mifanitsy ireo amin'izao fotoana izao nampiasain'i Easyjet, afa-tsy Boeing izay vao haingana no niala ny sambo. Ny feo ny fitaovana efa nofantenana mba hifanaraka tsara ny tena modely. Anisan'izany ny feo vokatry avy amin'ny mpandeha raha loza.
EasyJet Airline Company Limited (nahaleo toy ny easyJet, LSE: EZJ) dia Britanika fiaramanidina ny foibeny ao amin'ny London Luton Airport. Io no lehibe indrindra amin'ny zotram-piaramanidina ny United Kingdom, refesina amin'ny isan'ny mpandeha nitondra, miasa an-toerana sy iraisam-pirenena amin'ny asa voalahatra ny 600 lalana any 32 firenena. Ny ray aman-dreny orinasa, EasyJet plc, dia voasoratra ao amin'ny London Stock Exchange, ary dia-panorenana ny FTSE 100 Index toy ny 18 March 2013. Tamin'ny 7 Martsa 2013, dia mampiasa "maherin'ny 8,000 olona", miorina manerana an'i Eoropa, fa indrindra ao amin'ny UK.
EasyJet dia nahita haingana fanitarana hatramin'ny fananganana amin'ny 1995, rehefa nitombo alalan'ny fitambaran'ny novidiny sy tena ratsy anoloan'ny atosiky ny mpanjifa fitakiana ho ambany-vidiny ny fitaterana anabakabaka. Ny fiaramanidina, miaraka amin'ny zotram-piaramanidina fanampiny EasyJet Soisa, miasa ankehitriny ny 200 fiaramanidina, ny ankamaroany Airbus A319. Manana 23 manerana an'i Eoropa faladiany, ny lehibe indrindra ho Gatwick. Ao 2012, EasyJet nentina ho 50 tapitrisa mpandeha sy ny faharoa lehibe indrindra-vidiny ambany mitondra any Eoropa, ao ambadiky ny Ryanair.
EasyJet nasongadina tao amin'ny tantara mitohy amin'ny fahitalavitra Airline fampitana tamin'ny ITV, izay nanaraka ny fiaramanidina ny asa tao London, ary tatỳ aoriana Luton amin'ny faladiany hafa.
Airbus A319 / A320 Serie Special V3 avy amin'i François Doré: Panel version 3.05 hatramin'ny 24 jona 2012
More Info: https://www.rikoooo.com/fr/forum/154/33764
Jereo ny boky Airbus A319 V3 amin'ny teny Anglisy: https://www.rikoooo.com/images/public/rikoooo-62/EasyJet_Fleet_FSX__P3D/User_manual_PA_319_FD_Special_Version_V3.pdf
Jereo ny Airbus A320 V3 amin'ny teny anglisy: https://www.rikoooo.com/images/public/rikoooo-62/EasyJet_Fleet_FSX__P3D/User_manual_PA_A320_FD_Special_Version_V3.pdf
Airbus A319 & A320 cockpit LED manga
Downloads 110 606
Multiples Auhtors - Jereo ao amin'ny fonosana